Iindaba - Qingdao Silinde Industrial Equipment Co., Ltd.
Isilinda esincinci esincinci
Isilinda esikhulu seBore enkulu
Isilinda esinyukayo ngokuthe ngqo
Isilinda yeRotary Clamp
Iliwa kunye nePinion Isilinda
I-Rotary Table Rock kunye ne-Pinion Cylinder
Isilinda esineMagnetic Coupling Rodless
Lever yamasango isilinda
Unyango lwendlela ephezulu yonyango
I-desiccant yomoya efrijini
Umoya opholileyo emva kokubanda
Umahluli wenkungu yeoyile
Umahluli wenkungu encinci
Umahluli wenkungu yeoyile encinci
Ukucoca isixhobo sokucoca ulwelo
Umahluli we-Micro-mist ngokwahlula-hlunga kwangaphambili
Inkqubo yokuCoca umoya ococekileyo
2 Indlela Valve
Ukusebenza ngokuthe ngqo kwe-2 Way Sol. Ivaluva
Umqhubi oSebenzayo 2 Way Water Sol. Ivaluva
Umqhubi oSebenzayo 2 Way Steam Sol. Ivaluva
3 Indlela Valve
Ukusebenza ngokuthe ngqo kwi-3 Way Sol. Ivaluva
Ukuqhutywa kweenqwelomoya 3 Way Sol. Ivaluva
5 Indlela Valve
Ukuqhutywa kweenqwelomoya 5 Way Sol. Ivaluva
Ukusebenza ngokuthe ngqo kwi-5 Way Sol. Ivaluva
3 Iindlela ezininzi
5 Iindlela ezininzi
Ukuqhutywa kweenqwelomoya 5 Way Sol. I-Valve yeNamur
Umoya osebenzayo Valve
I-3 Way Air Valve esebenzayo
I-5 yeNdlela yokusebenza kweValve
3 Indlela Mechanical Valve
5 Way Valve Mechanical
Umatshini omtsha weValve
Umoya Valve Angle Valve
Uhlobo lweNdlela eyi-2
Uhlobo lweNdlela ye-3
Uhlobo lweNdalo iphela
Uhlobo lweNdlela ye-4/5
Umbhobho wetywina kumbhobho osongelweyo
Ukukhupha isivalo ngokukhawuleza
Isinyithi esenziwe ngesinyithi
Isantya esiphakamileyo ngokudibeneyo rotary
Isantya esiphezulu sokubambisana
Qingdao Silinde Industrial Izixhobo Co., Ltd.
Qingdao Silinde Industrial Equipment Co., Ltd.unikezelwe kuphando, uphuhliso, imveliso kunye neentengiso YSC brand iprojekthi esizisebenzelayo mveliso kule minyaka idlulileyo. Ngokusokola rhoqo yinkampani yethu kangangeminyaka, iimveliso zeYSC zithengisiwe kulo lonke ihlabathi. Ngomgangatho wayo obalaseleyo, iinkonzo ezigqityiweyo kunye nexabiso elinokhuphiswano, iye yaba yenye yezona ntengiso zinokuthenjwa kushishino lolawulo lwamashishini e China. Ngokusebenzisana nobuchwephesha bexesha elide kunye neenkampani zaseYurophu, zaseJapan nezaseMzantsi Korea, iye yatyebisa inkqubo yayo yemveliso kwaye yandisiwe kwivalvu yokuzibamba kunye nezixhobo ezizodwa ezivela kwimveliso yomoya wokubanda. Inkampani yethu iseke iseti yenkqubo esemgangathweni yolawulo lomgangatho ukuqinisekisa ukuba umgangatho wemveliso yohlobo lweYSC lufikelela kwinqanaba eliphambili phakathi koontanga bayo kwihlabathi liphela.
Ukusukela oko yasekwa, i-YSC, njengegama elidumileyo kwimveliso ye-pneumatic hydraulic, ibisoloko ibandakanyeka kwinkqubo ye-China. Kudala kuthotyelwa i-QSPT (umgangatho, inkonzo, ixabiso, ixesha) umgaqo wolawulo lweshishini kwaye utyebisa ngokuthe ngcembe, uhlengahlengisa kwaye ugqibezela ulwakhiwo lwemveliso ngokulandela iimfuno zentengiso yasekhaya kwaye inxulumene nenkqubela phambili yoomatshini bokusebenza eTshayina ukubonelela ngezixhobo ezixhasayo kunye iinkonzo kumashishini amaninzi kubandakanya ukupakisha, ukushicilela, i-elektroniki, isixhobo sombane, imoto, oomatshini, isinyithi, i-welding, ulawulo lwedijithali, ipetroli kunye nomzi mveliso weekhemikhali kulo lonke elase China. Okwangoku, iinkampani ezininzi ezaziwayo e-China ziseke ubudlelwane bexesha elide kunye nozinzileyo nathi.
Njengoko inkqubo yoshishino lokuzenzekelayo e-China iya isomelela, imingeni emitsha iphakanyisiwe koomatshini basekhaya nakwicandelo lokuzenzekelayo. Okwangoku, ikwabonelela ngamathuba kuphuhliso lwethu. Kwisiqingatha sesibini sonyaka ka-2006, siye safaka igalelo saza samisela i-YSC China yoVavanyo lweZiseko kunye nasekuqaleni ukumisela iqela lophuhliso. Kuluntu lwanamhlanje xa iindleko zemveliso ziphuculwa ngokuthe chu, iimveliso eziphambili zeYSC zigcina ukhuphiswano lwamaxabiso ngesizathu sokuba umgangatho uqinisekisiwe. Okwangoku, uthotho lophuhliso kunye nemveliso luyanda. Ngaphandle kweemfuno ezonelisayo zeodolo zasekhaya, ezinye zityiwa eMzantsi Korea nakumazantsi mpuma Asiya amazwe. Emva kweminyaka eliqela yokusebenza nzima, yafumana ukwamkelwa kwentengiso elinye ixesha. Ke ngoko, uphawu lwe-YSC ayisiyonyulo yakho kuphela kodwa kunye neenkonzo njengesiqinisekiso sempumelelo yakho. Kwiintsuku ezizayo, siza kuqhubeka ukubambelela kumgaqo wokunyaniseka ngaphandle kwengeniso yemilinganiselo kwaye akukho ukusetyenziswa gwenxa ekufumaneni izibonelelo. Siya kuzinikela ngokupheleleyo kuphuhliso loomatshini kunye noomatshini esizisebenzelayo e China.
Sithanda ukujoyina izandla kunye nawe ekudaleni ikamva elithembisayo lokuzenzekelayo kwamashishini asekhaya.
Ixesha lokuposa: Aug-14-2020
Idilesi: YSC, No. 38, Zhuzhou Road, Qingdao
Amanqaku eendlela zizonke
Uhlalutyo lweMveliso-icala loMthengi
Qingdao Silinde Izixhobo Industrial Co., ...